Amnesty International: Mareykanku dagaal qarsoodi ah ayuu ka wadaa Soomaaliya - BBC News Somali
Amnesty International: Mareykanku dagaal qarsoodi ah ayuu ka wadaa Soomaaliya
10 Abriil 2019
Lahaanshaha sawirka Reuters
Image caption Sannadkan 2019-ka wuxu Mareykanka Soomaaliya ka fuliyay 28 duqeyn
Dowladda Mareykanka ayaa muddooyinkii dambe kordhisay weerarada dhanka cirka ee ay ka fuliso Soomaaliya, kuwaasi oo ay sheegtay inay la bartilmaameedsadaan dagaalamayaal katirsan Al Shabaab.
Hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ay kamid tahay Amnesty International waxay sheegtay in duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya ay ku dhintaan dad rayid ah.
" Labadii sano ee lasoo dhaafay ee 20017-ka, 2018-ka wuxuu Mareykanka uu ka fuliyay Soomaaliya inkabadan boqol weerar, taas waxay muujineysaa in weerarda Mareykanka ee Soomaaliya ay kordheen oo ay ka badan yihiin weerarada ay ka sameyeen dalalka Libya iyo Yemen oo la isku daray". Waxa sidaasi BBC-da u sheegay Cabdullaahi Xassan oo Amnesty international u qaabilsan cilmi baarista Soomaaliya.
Cabdullaahi ayaa sidoo kale sheegay in 14 qof oo shacab ah lagu dilay, 8 kalena lagu dhaawacay weeraradaasi.
Muxuu yahay dagaalka qarsoodiga ee Mareykanka?
Cabdullaahi Xassan oo katirsan Amnesty International wuxu BBC-da u sheegay in dhawaan markii uu taliyaha ciidammada Mareykanka ee Afrika uu hortagay aqalka Kongreska uu sheegay in wax dagaal ah aysan ka wadin Soomaaliya, balse marka la eego baaxadda weerarada uu Mareykanka Soomaaliya ka wado uu yahay dagaal qarsoodi ah.
"In Mareykanka uu Soomaaliya ka fuliyay boqol iyo toban weerar, wa arrin aysan ogeyn shacabka Mareykanka, mida kale waxay tahay in sharciga Mareykanak uu u adeegsado weeraradaasi aysan ahayn kuwa la ogyahay iyo qaabka uu u qoran yahay". Ayuu raaciyaya Cabdullaahi.
Inkastoo dowladda Mareykanka ay sheegtay in weeraradaasi ay la eegato dagaalamayaasha Al Shabaab ayaa hadana Amnesty waxa kale oo ay sheegtay in aanan la garaneynin cida amarta weeraradas iyo in aysan jirin cid laga la xisaabtamo weerarada Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya.
Amnesty ayaa sidoo kale BBC-da u sheegtay in marka la eego dadka rayidka ee ku dhimanaya duqeymaha Mareykanka, aanan la garan karin cida bartilmaameedka uu yahay.
Image caption Duqeymaha cirka ee Mareykanka aya waxa ku dhintay dad rayid ah
Taliska ciidammada Mareynka Afrika ee AFRIKOM oo marar badan ku celceliyay in wax shacab ah aysan dilin ayaa isbuuc kahor waxay qirteen in laba qof oo shacab ah ay ku dileen weerar dhanka cirka ah oo meel u dhaw magaalada Ceelbuur ay ku qaadeen 1-dii Abril ee sannadkii 2018-ka.
Amnesty International waxa kale oo ay sheegtay in AFRIKOM ay ku dhawaaqeen in weeraradii labadii sann
o ee lasoo dhaafay ay ka fuliyeen Soomaaliya baaritaan lagu sameyn doona, si loo ogaado in dad shacab ah ay ku dhinteen.
Ciidammada sida garaka u tababaran ee dowladda soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ayaa ah kuwa inta badan iska kaashada weeraro toos ah iyo duqeymaha cirka ee ay la bartilmaameedsadaan Al Shabaab, waxana dowladda Mareykanka ay marwalba ku celcelisa in weeraradaasi ay ku wargeliyaan dowladda Soomaaliya, hasa yeeshee arrinta la isweydiin karo ayaa ah sababta taliska ciidammada Mareykanka ee Afrika aysan u qirsaneyn sababta dagaalka baaxada la eg ee ay kula jiraan Al Shabaab oo Amnesty ay sheegtay in dagaal aysan ogeyn shacabka Mareykanka uu yahay mid qarsoodi ah.
Mowduucyada la xiriira
Qodob kale oo Somali ah
Copyright © 2019 BBC. BBC-du kama mas'uul aha waxyaabaha ku qoran bogaggan kale ee debadda. Nidaamka aan ula dhaqanno xidhiidhada baraha debadda.